ဘစ်သူရဲကောင်းများ: 8-Bit Pixel Quest လှည့်စားမှုများ&Hack – Android Cheats သိကောင်းစရာများ
ဘစ်သူရဲကောင်းများ: 8-Bit Pixel Quest လှည့်စားမှုများ&Hack
အားဖြင့် အက်မင် | နိုဝင်ဘာ 23, 2021
Bit Heroes သည် သင်အကြိုက်ဆုံး RPG ၏ ကျက်သရေနှင့် လွမ်းဆွတ်မှုကို ဖမ်းယူသည်။!
သင်အကြိုက်ဆုံး 8-bit ဖြင့် မှုတ်သွင်းထားသော ကျယ်ပြန့်သောပွင့်လင်းကမ္ဘာကိုဖြတ်သန်းပြီး သင့်လမ်းကြောင်းကို စူးစမ်းရှာဖွေပါ။ & 16-bit dungeon သူရဲကောင်းများနှင့် monsters များ.
စုဆောင်းပါ။ & မင်းရဲ့စွမ်းအားကို တိုးမြှင့်ပြီး ကျောင်းဟောင်းမှာ မင်းရဲ့ဘေးမှာ တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ ဘီလူးတွေနဲ့ သူရဲကောင်းတွေကို ဖမ်းပြီး မင်းရဲ့အဖွဲ့ကို တည်ဆောက်ဖို့ ထောင်တွင်းရှာဖွေမှုကနေ အဆုံးမဲ့လုယက်မှုအပိုင်းတွေကို ဖန်တီးပါ။, အလှည့်ကျတိုက်ပွဲ. PvP ကစားကွင်းတွင် တိုက်ပွဲများကို ချေမှုန်းခြင်းဖြင့် သင်သည် ကုန်းမြေရှိ သူရဲကောင်းများထဲမှ အင်အားအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြပါ။, ထောင်တွင်းစီးနင်းမှုများကို အောင်မြင်စွာ ပြီးမြောက်စေခဲ့သည်။, နှင့် သင့်ဘက်တွင် တိုက်ပွဲဝင်ရန် အစွမ်းအထက်ဆုံး guild ကို ဖန်တီးပါ။!
*Retro dungeon တွားသွားစွန့်စားမှု!
*ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း PvP ကစားသူ၏ အဓိကမြို့၌ ရုပ်တု!
*ကျပန်းအဆင့်များ, ထောင်များနှင့် စီးနင်းမှုများ.
*အဆင့်မြှင့်ရန် ထောင်ပေါင်းများစွာသော ရောနှောခြင်းနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသော လုယက်မှုအပိုင်း, လက်ရာ, ပြန်လည်အသုံးပြုပါ။.
*ရာနှင့်ချီသော သတ္တဝါများကို ဖမ်းယူ၍ တီထွင်ဖန်တီးပါ။, ဘီလူးများ & မင်းအနားမှာ စစ်တိုက်ဖို့ အစွမ်းထက်တဲ့ သူဌေးတွေ!
*ရေပေါ်ပီဇာကဲ့သို့သော အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကို တပ်ဆင်ပါ။, သေးငယ်သော ယူနီကွန်များ, ပို!
*ကြီးမြတ်သောဘဏ္ဍာကိုရှာဖွေရန် အလွန်ခက်ခဲသောထောင်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် သူငယ်ချင်းများ/အသင်းအဖွဲ့ဖြင့် ပူးပေါင်းပါ။!
*Level up your guild to သော့ခတ်aspecial shop with powerful bonuses.
*World and Guild Chat ဖြင့် ဇာတ်လမ်းများကို မျှဝေပြီး ဗျူဟာများ ဖလှယ်ပါ။.
*NES ကျည်တောင့်မှ တိုက်ရိုက် စုတ်ပြဲသွားပုံရသည့် မူရင်း chiptunes တေးသွား.
ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားထားပါ: Bit Heroes သည် ကစားရန် အခမဲ့ဖြစ်သည်။, သို့သော် အချို့သော ဂိမ်းအပိုပစ္စည်းများကို စစ်မှန်သောငွေဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်သည်။. သင့်စက်၏ဆက်တင်များတွင် သင်သည် အက်ပ်အတွင်းဝယ်ယူမှုများကို ပိတ်နိုင်သည်။.
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): 8နည်းနည်း, နည်းနည်း, မင်္ဂလာပါ, သူရဲကောင်းများ, Pixel, Quest
← Brick Out – ဘောလုံးလိမ်လည်လှည့်&Hack Narcos: Cartel စစ်ပွဲများ & ဗျူဟာ လိမ်လည်မှုများ&Hack →
ခုတ်ထွင်ခြင်း။ & လိပ်: Live Guild Raids လှည့်စားမှုများ&Hack
Squid စိန်ခေါ်မှု: ရှင်သန်ခြင်းဂိမ်း – လှိုင်သာယာ&Hack
Dungeon နှင့် ပဟေဋ္ဌိများ – Sokoban လှည့်စားမှုများ&Hack
Fantastic Beasts’ ဒဏ္ာရီ – လှိုင်သာယာ&Hack
ကျွန်ုပ်တို့သည် Illuminati ဖြစ်သည်။: ပူးပေါင်းကြံစည်မှု – လှိုင်သာယာ&Hack
အမှိုက်ပုံးကလေးများ : ဂိမ်းလိမ်များ&Hack
တကယ့်လက်ဝှေ့ပွဲ2– လှိုင်သာယာ&Hack
Inside Out Thought Bubbles – လှိုင်သာယာ&Hack
Emoji ကိုက်ညီသော ပဟေဋ္ဌိ- ဦးနှောက်ကို မြှင့်တင်ပါ။ – လှိုင်သာယာ&Hack
Squid ဂိမ်းများ ရှင်သန်မှု – လှိုင်သာယာ&Hack
Te Reo Māori/mi/bit-heroes-8-bit-pixel-quest-cheatshack/
gagana fa'a Samoa/sm/bit-heroes-8-bit-pixel-quest-cheatshack/